hoy ny fampitam-baovaon’ny solombavambahoaka avy any an-toerana, Lucien Rakotomalala. Nataon'izy ireo izay naha rava ny Dinabe satria raha mbola eo ny Dinabe dia tsy hisy ny vola azon'izy ireo amin'ny kolikoly. Amin'ny maha solombavambahoaka ny tenako dia efa im-betsaka no nisy fihaonana niarahako tamin'ireo tompon'andraikitra toy ny minisitry ny fitsarana sy ny SEG nefa tsy nisy vokany izany, hoy hatrany ny fanazavany, mihorohoro tanteraka ny vahoaka any an-toerana. Isan’ireo namoy ny ainy tao anatin’izany habibiana izany ny mpampiveloba na « sage femme » iray tao Ambahikily sy ny mpanaradia ao Befandriana Atsimo. Efa nisy mpanaradia roa koa matin'ny dahalo tao Antanimeva, herinandro lasa izay, nefa tsy azo sary izany ary ny fianakavian'ireo maty izay tompon'omby indray no ampanamborin'ny fitsarana. Tsara ho marihina fa misy dahalo iray tratran'ny fokonolona tamin'io fotoana io izay efa naterina tany amin'ny zandarimaria nefa tsy mety mandray ireto farany. Mbola tazonin'ny fokonolona io dahalo io hatramin'izao, hoy hatrany ny fitantaran’ity solombavambahoaka ity.